धर्म परिवर्तनको कुरा | eAdarsha.com
धर्म परिवर्तनको कुरा
१. धर्म हाम्रो समाजमा एक यस्तो विषय भएको छ जसको आधारविना जीवनयापन नै सम्भव छैन भन्ने एक पक्ष छ भने अर्को पक्ष धर्मको के काम ? धर्ममा लागेर के पाइन्छ र ? भन्नेहरु रहेका छन्। वषौर्ं वर्षदेखि विवादरहीत रहँदै आएको धर्म अब विवादास्पद भएको छ। यसले अन्यौलको स्थिति सिर्जना गरेको छ।
२. धर्म मान्नेहरु आफ्नै किसिमले गइरहेका छन्। उनीहरुलाई यताउताको वास्ता छैन। उनीहरु धर्मको नाममा अनेक कर्मकाण्डहरु गर्दछन् र कर्मकाण्डहरुमा उपस्थित एवम् सहभागी भएका समूह देखेर उनीहरु द· पर्दछन्। त्यसैमा उनीहरुको जीवनयापन भइरहेको पनि छ । उनीहरुलाई आफ्नो समाजका मानिसहरु कहाँ कसरी अन्त गइरहेका छन् भन्ने पनि मतलब छैन।
३. धर्म नमान्नेलाई त त्यसको मतलब हुने कुरा भएन। तर एकथरी यस्ता व्यक्तिहरु छन् जो धर्ममा चुर्लुम्म डुब्न पनि सक्दैनन् र आफ्ना मानिस अन्त गएको देख्न पनि सक्दैनन्, उनीहरु ठूलो समस्यामा छन्। उनीहरु आफ्नो धर्मलाई अरुले होच्याएर भनेको , अपमान गरेको देख्न र सुन्न पनि सक्दैनन्।
४. उनीहरु आफ्नो धर्ममा भएका विकृति र विसंगति हटाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छन्। उनीहरु धर्मको नाममा र संस्कृतिको नाममा समाजमा टाँसिएर रहेका अन्धविश्वास मेटाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छन्। उनीहरु कर्मकाण्ड छोट्याउने, मितव्ययी बनाउने र छुवाछुत प्रथा धर्मशास्त्रबाट निर्मूल गर्नुपर्दछ भन्नेमा छन्।
५. तर धर्मको ठेक्का लिएर बसेकाहरुबाट कहिले सुधारात्मक कदम चालेको देखिएको छैन। कोही कसैले त्यस्तो गरेमा ऊ समाजबाट बहिष्कृत हुन सक्दछ। धर्ममा सामयिक सुधार नगरिएबाट हाम्रो धर्म एकातिर समाज अकैतिर गएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। धर्म किन मान्ने भन्नेहरु देखिएको त्यसैकारण पनि हो, शायद्।
६. हाम्रो धर्ममा विश्वासको संकट पैदा भएको छ। हाम्रो धार्मिक व्यक्तिहरुले यसो-यसो गरेमा त्रि्रो रोग निको हुन्छ भन्यो भने अन्धविश्वास हुन्छ भने त्यही कुरा अन्य धर्मकाहरुले भनेमा त्यो सत्य हुन्छ। यस्तो स्थितिले हाम्रो समाजका मानिसहरु अन्य धर्ममा अर्थात् इसाइ धर्ममा पलायन भइरहेका छन्।
७. यस्तो स्थितिमा गए जाओस् भनेर पलायन भएको देखेर पनि नदेखेझैं गरी बसिरहने हो कि रोकथामको केही उपाय गर्ने हो, यो ठूलो प्रश्न बनेर आएको छ। यो प्रश्न धर्मका ठेकेदारहरुका लागि मुख्य रुपले हो भने धर्म नमान्नेहरुका लागि पनि हो। किनभने उता गइसकेपछि साधारणतया यता फर्काउँन सकिँदैन। पछि पश्चाताप पनि हुन सक्छ। फेरि यो कुरा जनतासँग मात्र सम्बन्धित पनि होइन, सरकारसँग पनि सम्बन्धित छ र संविधानसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसकारण यसमा सबैको ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक छ।